Xaaji Abuukar Cumar Caddaan oo lagu xiray Magaalada Muqdisho – AfmoNews
Xaaji Abuukar Cumar Caddaan oo lagu xiray Magaalada Muqdisho
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Ciidanka Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA) ay xabsiga u taxaabeen Xaaji Abuukar Cumar Caddaan.
Xaaji Abuukar Cumar Caddaan oo ka mid ah ganacsatada Magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in xalay laga soo xiray hoyga uu ka degan yahay Caasimadda Muqdisho.
Wareysi uu Xaaji Abuukar Cumar Caddaan siiyay Radio Kulmiye ee Magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay inuu taageersan yahay dagaalka Al Shabaab ka waddo dalka, isla-markaana uu doonayo in la laayo diblomaasiyiinta shisheeye ee degan Xarunta Xalane.
Bishii hore ee September ayay ahayd markii Magaalada Muqdisho lagu xiray ganacsato uu ka mid ahaa Maxamuud Cumar Caddaan, oo la dhashay Xaaji Abuukar Cumar Caddaan. Tallaabada lagu xiray waxay ka dambeysay, markii lagu eedeeyay inay u garsoor doonteen Maxkamadaha Al Shabaab.
Saraakiisha laamaha ammaanka iyo Masuuliyiinta Dowladda Federaalka ayaan ka hadlin tallaabada lagu xiray ninka odayga ah.